Inja leash & ikhola mveliso - China Inja leash & ikhola abavelisi kunye nababoneleli
Izilwanyana zasekhaya zithandeka ngokwenene, kwaye umbuki zindwendwe angathanda ukuzithatha xa eziya ngaphandle. Ngaphandle kokuba inja idibanise kunye neekhola, inja inokuya naphi na apho ingathanda ukuya khona. Yiyo loo nto iikholeji zenja kunye neeleashes zizinto ezifanelekileyo zokusetwa kwezilwanyana zasekhaya, ezinokusetyenziselwa uqeqesho, ukuhamba, ukulawula, ukuchonga, ifashoni, izipho zonyuselo, okanye ezinye iinjongo. Izinto ezikhoyo ezikhoyo zilinganisa umtya wenayiloni ngentambo ephothiweyo / yesatin / yelaphu kunye nomtya. Ukuthunga umtya we-ultra-soft strap kunye ne-nylon strap kunye namachaphaza okubonakalisa + isikhumba se-PU. Imathiriyeli ye-leashes kufuneka ibe yomelele, ke ukuxelisa umtya wenayiloni lolona khetho lufanelekileyo. Kwakhona, izinto ezahlukeneyo kunokukhethwa kuzo njengebhakethi yokhuseleko, i-bopha ehlengahlengiswayo, isilayida seplastikhi, umlobothi wakho kunye nezinye izinto ezilungiselelwe wena. Okanye ukuba ungongeza ezinye izinto ezingafunekiyo, kulungile. Ngokubhekisele kwilogo, kunokukhethwa iinkqubo ezahlukeneyo kubandakanya ushicilelo lwe-silkscreen, ushicilelo lwe-offset, ilogo ye-sublimated okanye ephothiweyo. Ubude bayo bunobungakanani obuqhelekileyo, kodwa ukuba bunobungakanani obulungiselelwe wena, nayo yamkelekile. Ukuba usenamanye amathandabuzo, shiya kuthi kwaye masibonelele ngeziphakamiso zobungcali. Yeka ukuthandabuza kwaye unxibelelane nathi kwangoko.
Inja iyabopha kunye neekhola